Xiaomi Mi MIX ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် Androidsis
Xiaomi က Mi MIX ကို bezels မပါဘဲမျက်နှာပြင်ပါသည့်ဖုန်းတစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဤဖုန်းကို Xiaomi Mi Note2နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ Xiaomi သည်လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Mi MIX ဆိုသည်မှာ၎င်းအဖြစ်အပျက်တွင်ကြေငြာခဲ့သောကြောင့်ထိုသတင်းသည်လမ်းလွဲသွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မျက်နှာပြင်ပါသောဖုန်းသဘောတရားကို bezels မပါပဲ.
အကယ်၍ Mi Note2နှင့်အတူ၎င်းသည်ကွေးနေသောနှစ်ဖက်သို့အစွန်းသို့ရွေ့သွားပြီး Mi MIX နှင့်အတူ၎င်းကိုတင်ပြသည် 6,4 လက်မ 2040 x 1080 မျက်နှာပြင် မျက်နှာပြင်၏ ၉၁.၃% သော ၁၇: ၉ မျက်နှာပြင်အချိုးအစားရှိသည်။ မျက်နှာပြင်ထိပ်နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အလွန်ပါးလွှာသော bezel များရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံကိုသင်မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းအထူးပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
2 အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ Xiaomi Mi MIX နှင့်အတူ
Mi Mix ဟုခေါ်သောဤအယူအဆ၏တစ်ခုတည်းသောထင်ရှားသော bezel သည်အောက်ခြေတွင်ရှိပြီးရှေ့စပီကာနှင့်ကင်မရာတည်ရှိရာနေရာအတိအကျဖြစ်သည်။ Mi MIX တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်များမရှိပါ မျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပထမ ဦး ဆုံး Xiaomi ဖုန်း။ 17:9ရှုထောင့်ကဆိုလိုသည်မှာ virtual ခလုတ်များနှင့်ပင်သင်၏ multimedia content အားလုံးအတွက် 16:9area ရှိလိမ့်မည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့နားကြပ်နှင့် proximity sensor တို့မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုသိရန်သံသယရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Xiami သည်၎င်းတို့ကိုနေရာချထားရန်၎င်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ MIX သည်အသုံးပြုသည် ကြွေစပယ်ယာ နားကြပ်အဘို့အ Piezoelectric နှင့် display မှတဆင့်အလုပ်လုပ်သော ultrasonic Proximity Sensor ။
El ဖုန်း၏ကိုယ်ထည်တွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းသည်ကြွေထည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်၊ နောက်ကျော၊ ဘောင်နှင့်ခလုတ်များကိုဤပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ စက်မှုဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်နာ Philippe Starck ကပြုလုပ်သည်။
ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်းတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သံသယမရှိပါဘူး။ ထူးခြားချက်ကတော့ Qualcomm Snapdragon 821 ချစ်ပ်နဲ့ 128GB မော်ဒယ်လ်အတွက်မူကွဲနှစ်မျိုးနဲ့ RAM 4GB ယူထားတဲ့ 256GB ရှိပြီး 6GB RAM ရှိတဲ့ 256GB ပါ။ XNUMXGB မော်ဒယ်တွင်ရွှေအစင်းပါရှိပြီးအသံထွက်လည်းပါဝင်သည် ကင်မရာမှန်ဘီလူးအပေါ် 18K နှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ။
နောက်ကင်မရာမှာရှိတယ် 16 megapixels PDAF နှင့် 4K video တို့ပါ ၀ င်သည်ရှေ့တစ်ခုက 5MP သွားနေစဉ်။ ၎င်းတွင် SIM ဆက်သွယ်မှုနှစ်မျိုး၊ ၄,၄၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့် Qualcomm Quick Charge 4,400 မြန်သောအားသွင်းမှုများရှိသည်။
ဒီဖုန်းရဲ့စျေးနှုန်းကတက်နေပြီ 515GB RAM model အတွက်ဒေါ်လာ ၅၁၅ အထိရတယ် Internal Memory 128GB နှင့် 590GB နှင့် internal memory 6GB တို့ပါဝင်သည်။ မျိုးကွဲနှစ်ခုစလုံးတွင်သားရေအိတ်တစ်လုံးရှိသည်။
အခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ Xiaomi Mi MIX နှင့်အတူ
multimedia ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဖွင့်ရန်မျက်နှာပြင်ကြီးများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့် Phablets များပိုမိုသက်ရောက်လာပါက၎င်းတွင်ရှိသည့်ဖုန်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဘာပြောနိုင်သနည်း 91,3% မျက်နှာပြင်အချိုးအစား?
၆.၄ လက်မအရွယ် panel သည်ရှေ့မျက်နှာပြင်အားလုံးနီးပါးအားစီးရီးများကိုကြည့်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များတွင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအုတ်တစ်ချပ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ခံစားစရာမလိုပဲကျွန်ုပ်တို့ကိုအကျိုးရှိစေမှာပါ။ ကျနော်တို့က၎င်း၏အတိုင်းအတာကိုသိသော၏မရှိခြင်း၌၎င်းကိုလူကြိုက်အများဆုံး phablets များဘေးတွင်ထားနိုင်ရန်အခြား ၅.၉ လက်မအရွယ် screen များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိပ်မများလှပါ။
Mi MIX သည်သင်၏ Mi Note 2၊ Galaxy S7 အစွန်းနှင့်နောက်လာမည့် Mate9Pro တို့၏ "အစွန်း" အပြီးတွင်၎င်းတို့ကိုလုံးလုံးလျားလျားဖြတ်သန်းသွားသည်။ တစ် ဦး bezel- လျော့နည်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူတက်လာကြ၏ ဒါကတွေ့မြင်ခဲ့ရာနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအခြားအယူအဆပေးထားပါတယ် S6 အစွန်းနှင့် S7 အစွန်းကိုလက်တွင်ကိုင်ထားချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်အံ့အားသင့်သွားခဲ့ရသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ Mi MIX ရသောအခါမည်သည့်အခါမျှမကြားနိုင်ခဲ့။ တွေ့ကြုံခံစားဖို့တစ်ခုခု
ထို့အပြင်သိရန်ကျန်ရှိနေသည် နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရသောအခြေအနေများတွင်ဖုန်းမည်သို့ပြုမူမည်နည်း နှင့်ကျနော်တို့နီးပါးအကောင့်သို့ယူပါ။ ထို့ကြောင့် Xiaomi က၎င်းကိုဖုန်းကွန်ယက်ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ၀ ယ်ယူသူများကိုထောင်နှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများအကြား Mi MIX2အတွက်အယူအဆကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များရရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi က Mi MIX ကို bezels မပါဘဲမျက်နှာပြင်ပါသည့်ဖုန်းတစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်
Amazon App Store မှတဆင့်စျေးနှုန်းထက်ဝက်သာ Evernote Premium ဖြစ်သည်
ဟယ်လိုဝင်း 2016 အတွက်အကောင်းဆုံးအမှုများနှင့်အဖုံးများ။